Home Wararka Xildhibaano, siyaasiyiin iyo ururro taageeray dooda aqoonsiga Somaliland ee Baarlamaanka Ingiriiska
Xildhibaannada kala ah Stephen Doughty, Tom Tugendhat iyo Zac Goldsmith oo ka tirsan Baarlamaanka Ingiriiska, James Carver oo ah siyaasi hore uga tirsanaa Baarlamaanka Yurub iyo ururka waddamada aan la aqoonsan ee loo soo gaabiyo UNPO, ayaa soo dhaweeyay dooda uu Baarlamaanka Ingiriisku ka yeelanayo aqoonsiga Somaliland.
Tom Tugendhat oo ah madaxa Guddida Arrimaha Dibadda ee Baarlamaanka Ingiriiska, ayaa sheegay in uu taageerayo soo jeedinta xildhibaan Gavin Williamson uu ku doonayo in Somaliland la aqoonsado.
Maamul xumida Madaxweynaha Muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa keentay in wadamada daneeya Soomaaliya aay ka niyad jabaan hab dhaqanka Villa Somalia, taasoo dalka gelisay xaalad siyaasadeed, amni iyo dhaqaale oo aad u cakiran.
Previous articleGuddiga doorashooyinka Puntland oo shaaciyay qabashada 11 Kursi
Next article[Deg Deg]: Jen. Xuud oo loo shirqoolayo in Xamar Lagu Xero.
Ajendaha Shirka maanta Madaxda maamul goboleedyadda
Sirdoonka Somaliland oo fashiliyay weerar lala damacsana Hargaysia